ကေအိုင်အိုသတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူနှင့် မေးမြန်းချက် - Kachinland News
ကေအိုင်အိုသတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူနှင့် မေးမြန်းချက်
အငျတာဗြူး April 25, 2018April 29, 2018 KLN
KLN – မြန်မာစစ်တပ်ဟာ ဧပြီလ(၁၁)ရက်နေ့ကစပြီး ကချင်ပြည်အနောက်ဖက်ခြမ်း ဒေသကို အပြင်းအထန်တိုက်စစ်ဆင်လာခဲ့တယ် ။ ဘာကြောင့်ယခုလိုတိုက်စစ်ဆင်ာခဲ့တယ်လို့ထင်ပါသလဲ?
ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူး – မြန်မာစစ်တပ်ကနေအပြင်းအထန်တိုက်စစ်ဆင်လာခြင်းဟာ-
၁။ နယ်မြေစိုးမိုးရေး -အခုသူတို့တိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့ တပ်မဟာ(၂)ဌာနချုပ်နယ်မြေ၊ တပ်ရင်းအမှတ်(၁၄)နဲ့(၁၁) နယ်မြေ တွေဟာ ဆိုရင်တရုတ် OBOR လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နဲ့လုပ်ငန်းပူးတွဲလုပ်ဖို့ဒီနယ်မြေတွေကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
၂။ ကေအိုင်အိုရဲ့ ငွေရပေါက်တွေကိုသူတုို့ပိတ်ချင်တယ်။
၃။ ကေအိုင်အို ကိုထောက်ခံပြီး ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ပြည်သူလူထုကို ခွဲထုတ်ချင်တယ်။ ဒီ(၃)ချက်ကတော့အဓိကအချက်တွေဖြစ်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။
KLN – အခုအချိန်မှာ တပ်မဟာ(၂)နယ်မြေ၊ အောက်လောက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်မှာဖြစ်နေတဲ့ စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ ကျေးရွာနေပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေက ဘယ်လိုရှိပါသလဲ?
ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူ – တပ်မဟာ(၂)အောင်လောက်နယ်မြေရဲ့အခြေအနေက-
ဆက်လက်ပြီး စစ်ရေးပြင်းထန်နေဦးမယ့်အခြေအနေပါ။ မြန်မာစစ်တပ်ဖက်ကလှုပ်ရှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကေအိုင်အေ ဖက်ကလှုပ်ရှားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုက်ပွဲတွေကအချိန်ပြည့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာဖြစ်လို့ စစ်မြေပြင်ဖြစ်သွားပါပြီ။ ကျေးရွာနေပြည်သူလူထု(၂၀၀၀)ကျော်စစ်ဘေးရှောင်ရင်းဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေပါတယ်။ တစ်ချို့ကတနိုင်းမြို့ဖက်မှာ ပိတ်မိနေပါပြီး၊ တစ်ချို့ကတောထဲမှာ ပိတ်မိနေတယ်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့စစ်တပ် က နေရပ်ဒေသကိုပြန်နေနိုင်ပါပြီလို့ပြောပေမယ့် မြန်မာစစ်တပ်ရှိနေတဲ့အတွက် သူတို့မပြန်ရဲကြဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စစ်ဆေးမေးမြန်းနှောင့်ယှက်၊ ကေအိုင်အေ ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာဖက်လမ်းပြလုပ်ခိုင်း၊ စစ်မြေပြင်နေရာမှာ ရှေ့ပြေးလမ်းလျှောက်လုပ်ခိုင်းမှာကို ကြောက်လို့ပါ။ ဧပြီလ(၂၃)ရက်နေ့ကလည်း အောက်လောက် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ(၂)ဦးကိုပစ်သတ်၊ (၃)ဦးဒဏ်ရာရပြီး (၂)ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ IDP တွေမှာလည်း အစားအသောက်၊ဆေးဝါးနဲ့ နေရာအရမ်းခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ထွက်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။
KLN – ကဆုန်နဲ့ ဇွပ်မိုင်ကပြည်သူတော်တော်များများ နမ့်တီးလမ်ဗျော်ရမ် ဖက်ရောက်နေတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။ အခုအချိန်တပ်ရင်းအမှတ်(၁၁)ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကစစ်ရေးအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲ?
ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူ – တပ်ရင်းအမှတ်(၁၁)နယ်မြေဖက်လည်းစစ်ရေးပြင်းထန်နေပါတယ်။ ပြည်သူတစ်ချို့နမ့်တီးလမ်ဗျော်ရမ်၊ တစ်ချို့က နမ်ဂျင် မြစ်ကြီးနားဖက်ကိုထွက်သွားပါတယ်။ မိမိနေရပ်ဒေသကိုပြန်မလာရဲကြဘူး။ အစားအသောက်ခက်ခဲတယ်၊ မိမိပိုင် လယ်ယာမြေ၊ နေအိမ် အားလုံးကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ကြရတယ်။
KLN – အမှတ်(၂၆)တပ်ရင်းနယ်မြေဖက် အခုချိန် တိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေတုန်းပဲလား? လုိုင်နောင်ခူးကပြည်သူတွေကို မြန်မာစစ်တပ်ကတားဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းလဲကြားသိရပါတယ်။ အခုအချိန် တားဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေက?
ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူ – အမှတ်(၂၆)တပ်ရင်းနယ်မြေဖက်လည်း စစ်ရေးပြင်းထန်နေပါတယ်။ လိုင်နောင်ခူး ပြည်သူတစ်ချို့ကိုလွတ်လိုက်ပေမယ့် တစ်ချို့ကိုတော့မလွတ်ပေးဘူး။ မြန်မာစစ်သားတွေနဲ့အတူထားပြီး အကာအကွယ်(လူတံတိုင်း) လုပ်ခိုင်းတဲ့ပုံစံပါ။ သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုသိမ်းဆည်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတယ်။ နောင်းနန်ကျမ်းစာကျောင်းက လက်တွေ့ကွင်းဆင်းနေတဲ့ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်ဆရာ/ဆရာမ (၃)ဦးလဲပါဝင်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ သူတို့ကိုသွားခေါ်ယူဖို့ညှိနှိုင်းပေမယ့် ကာမိုင်းဗျူဟာမှူးကအခွင့်မပေး တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။
KLN – အခုတစ်လော ဌာနချုပ်ဖက်ကို မြန်မာစစ်တပ်က စစ်အင်အားတိုးချဲ့နေကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ ဌာနချုပ်နယ်မြေဖက်ကလတ်တလောစစ်ရေးအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲ?
ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူ – အခုအချိန် ဌာနချုပ်နယ်မြေ ဖက်ကအခြေအနေကတော့-
မမ-၆၀၊ ၈၀၊ ၈၁၊ ၁၂၀၊ ၁၀၅၊ ၁၀၇ လို့ယူဆရတဲ့လက်နက်ကြီး တွေနဲ့အဆက်မပြတ် ပစ်ခတ်နေပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ(၂၄)ရက်နေ့ ညကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီး ဟာ လိုင်ဇာ ၀ိုင်ကြိုင် IDPs camp အနီးမှာသွားကျတာကြောင့် အဲဒီမှာဆက်ကပ်နေတဲ့ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တယ်။ ဒီနှစ် ၂၀၁၈ ဧပြီလ(၁၁)ရက် နေ့ကလည်း လိုင်ဇာပတ်ဝန်းကျင် တပ်မဟာ(၃)နဲ့(၅)၊ လိုင်ဇင် ဘက်ပေါင်းစုံဖက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တယ်။ လိုင်ဇာ၊လ၀ရမ် ကျေးရွာမှာဌက်ပျောထမ်းနေတဲ့ ပြည်သူတစ်ဦး သေဆုံးပြီး၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရတယ်။ ဧပြီ(၁၂)ရက်နေ့ကလည်း လိုင်ဇာ၊ မိုင်ဂျာယန် တပ်မဟာ(၅)နယ်မြေ၊ လှုပ်ရှားတပ်ရင်းဌာနချုပ် နယ်မြေဖက်ကို လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တယ်၊ ဧပြီလ(၁၅)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ မှာလည်း လိုင်ဇာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုပစ်တယ်။ ဧပြီလ(၂၀)ရက်နေ့ မှာ တပ်မဟာ(၃), (၅), လုိုင်ဇာ, လိုင်ဇင် နဲ့ဖလတ် နယ်မြေဖက်ကို လက်နက်ကြီးပစ်သွင်းတယ်။ တစ်နေရာမှာ တစ်ခါပစ်ရင် လက်နက်ကြီးအချက်(၂၀) အထက်၊ နေရာအားလုံးပေါင်းရင် အခက်ပေါင်း(၅၀) နဲ့အထက်ပစ်ခဲ့တယ်။
ဧပြီ(၂၃)ရက်နေ့ကစပြီး ဌာနချုပ်နယ်မြေ၊ ဆဒုံးနယ်မြေတွေဖက်ကို စစ်အင်အားအထူးတလည် ဖြည့်တင်းတိုးချဲ့ကြတယ်။ ဧပြီ (၂၄)တစ်ရက်ထဲမှာပဲ စစ်သားတင်လာတဲ့စစ်ကား(၅၀)ကျော်တယ်။ ဆဒုံးဖက်ကိုစစ်ကား(၃၀)ကျော် သွားရောက်စစ်အင်အားဖြည့်တယ်, လက်နက်ကြီး၊ သံချပ်ကာကား နဲ့ မြင်းတွေပါတယ်။ တပ်မဟာ(၁)နယ်မြေ အင်မိုင်ဝလောင်၊ ဂွီထောင်ဒရုမှာ ဧပြီ(၂၄) ရက်ညက မော်တော်ကား(၂၀) ကျော်ဖြတ်ကူးသွားပါတယ်။ ချီဗွေလမ်းဖက်လည်းမော်တော်ကား နဲ့တက်လာကြတယ်။ ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ်းဖက် မှာလည်းဒေသခံပြည်သူလူထု ကိုဘယ်ဖက်ကိုမှမထွက်ဖို့ မြန်မာစစ်တပ်ကပြောထားကြောင်းကြားသိရပါတယ်။ တပ်မဟာ(၁)နယ်မြေဖက်လည်း ထုိုးစစ်ဆင်မယ့်အနေအထားရျိပါတယ်။ ဌာနချုပ်နယ်မြေ, ဆဒုံး, တပ်မဟာ(၇)၊ တပ်မဟာ(၁)နယ်မြေ တွေဖက်စစ်ရေးပြင်းထန်လာမယ့်အခြေအနေရှိတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။
KLN – အခုလိုမြန်မာစစ်တပ်က စစ်အင်အားအပြင်းအထန်တုိုးချဲ့ ပြီးလူမျိုးတုန်းအောင်ပြုလုပ်ရေးစီမံချက်အနေနဲ့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လာရင် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မလား?
ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူ – မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးပြီး နိုင်ငံရေးအဖြေရရှိဖို့တော့ခက်ခဲမယ်လို့ထင်မြင်ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နယ်မြေစိုးမိုးရေးအတွက်သူတို့ လိုချင်တဲ့နယ်မြေ မရမချင်း၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှိုကုလည်းသူတို့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။
KLN – နယ်မြေဒေသအသီးသီးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ ကချင်ပြည်သူလူထုကို မှာကြားစရာစကားများရှိပါသလား?
ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူ – ဒေသခံပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကတော့-ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ လွတ်လပ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအခွင့်အလမ်းတွေဟာ လွယ်လင့်တကူရနိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေး အခက်အခဲတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ စိတ်ဓါတ်ကျ၊ စိတ်ပျက်တာတွေမဖြစ်ကြပါနဲ့၊ ခက်ခဲ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရပါမယ်။ အချင်းချင်းစိတ်သဘောတူညီစွာနဲ့ ပိုမိုသွေးစည်းညီညွတ်ကြဖုို့ အင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့။ IDP တွေကိုကူညီဖို့နဲ့ ကယ်ဆယ်ဖို့အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရအောင်။ IDP မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူအားလုံးလဲ မိမိ တိုင်းပြည်ရရှိချင်တဲ့စိတ်၊ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိချင်တဲ့စိတ်နဲ့ နားလည်သည်းခံပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။
Home ကေအိုင်အိုသတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီးအင်ဖန်နော်ဘူနှင့် မေးမြန်းချက်